ProtonMail bụ ihe mepere emepe na gam akporo: mara ins na outs | Gam akporosis
ProtonMail na-aghọ isi mmalite: onye ahịa email nke na-akwado maka nzuzo
Anyị na-amasịkarị chọpụta ngwa ọhụrụ na nke a ọ bụ ProtonMail, onye ahịa email nke meghere emeghe ma nke ahụ dị mma iji mee ka ị mara, nke na-akwado nzuzo na njedebe ahụ na njedebe ka e-ezoro ezo na ozi ịntanetị mgbe niile na onye zitere ya na na transmitter.
Onye-ozi email a nwere taa otu nde ndị ọrụ gburugburu ụwa. Ọ nwere ụdị maka gam akporo, iOS na weebụ iji nwee ike ịnweta igbe mbata anyị site na ngwaọrụ ọ bụla. Ozi ya doro anya: iji kpuchido nzuzo nke ndị ọrụ. Gaa maka ya.
1 ProtonMail ghọrọ isi mmalite
2 Ihe kachasị mma nke ProtonMail
3 Gụnyere ụdị nke ProtonMail maka € 4,00 kwa ọnwa
ProtonMail ghọrọ isi mmalite
Ihe ugbu a na-emeghe emeghe Ọ bụ ihe dị mkpa karịa ime ka o doo anya na ọ bụghị naanị na kọntaktị ezoro ezo, ọrụ VPN na ọbụna kalenda njedebe-akpọ ProtonCalendar. Eziokwu nke itinye koodu gị na Github bụ iji nyekwuo ndị ọrụ XNUMX nde gị ndị tụkwasịrị onye ahịa a aka.
Site na blọọgụ ya ọdeghara iji mee ka o doo anya na ha na-akwado nghọta na otu ha siri dị oke ime ka a mara onwe ha, gosipụta koodu ha na otu ha si edebe koodu ha na nzuzo. A nnukwu ụzọ anyị hụrụ na ngwa ndị ọzọ Ma ama dị ka Kiri Browser kemgbe otu izu gara aga ma obu otu Pịa SMS ọnwa 4 gara aga.
Ọ bụghị ngwa ngwa Proton mbụ iji ghe oghe. Ngwa weebụ bụ kemgbe 2015 nke mere na mgbe e mesịrị ọ bụ iOS. Ngwa ngwa ngwa ProtonMail bụ nke ikpeazụ etinye koodu ya na Github. N'ezie, maka ụdị gam akporo, ọ goro ụlọ ọrụ nwere onwe ha iji nyochaa ngwa ahụ ma hụ enweghị nsogbu. Eziokwu ahụ bụ na koodu dị ugbu a na Github ga-eme ka ndị ọzọ nwee anya na nchedo nzuzo na nzuzo.
Ihe kachasị mma nke ProtonMail
Ihe eji mara ProtonMail bụ nke nzuzo ahụ a na-ewere na njedebe na njedebe maka ozi ịntanetị gị niile, ihe nzochi ngwụcha na njedebe dakọtara na OpenPGP, a na-echekwa ozi ịntanetị na usoro ezoro ezo na ọbụnadị otu ngwa ahụ nwere ike ịgụ ha. Site na nhọrọ ndị a maka nzuzo ọ na - aghọ onye ahịa email ị ga - echebara echiche.
Dịka nkọwa metụtara nchekwa, ihe ProtonMail sava dị na Switzerland, mba a ma ama maka inwe iwu nzuzo kacha sie ike n'ụwa. N'ezie, ProtonMail n'onwe ya na-enye anyị ohere ịmepụta adreesị ozi-e protonmail.com ọhụrụ na njikwa akpaka nke igodo PGP.
Na mgbe anyị gara na njikwa ozi, ProtonMail na-enye anyị Ngụọ oge ka enwere ike ibibi ozi Ozugbo ezitere gị, hazie ozi na mmegharị ahụ na aha ndị na-achịkwa, akwụkwọ nzi na-abata, na izipu ozi-e ezoro ezo site na adreesị ozi-e na-abụghị ProtonMail.
Nwere a akpali interface ruo n'ókè nke ihe anyị nwere ike ịtụ anya n'aka onye ahịa email nke oge a na site na nzaghachi natara, ọ bụ onye ahịa na-enweghị ọtụtụ ntụpọ, ọ bụ ezie na ọ nwere ha. N'ezie, ha maara ngwa ngwa iji kpọtụrụ ndị ọrụ ma si otú ahụ dozie njehie dị iche iche.
Gụnyere ụdị nke ProtonMail maka € 4,00 kwa ọnwa
La free version na-enye anyị 500MB nke nchekwa, Ozi 150 zigara kwa ụbọchị, aha 20, adreesị 1 na nkwado nwere oke; karia ezuru ubochi anyi ta. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe ọzọ, anyị nwere ike ịgafe nsụgharị Plus na € 4 kwa ọnwa; ee, i nwere free ngwa dị ka Ihe na-enye ihe niile, ọ bụ ezie na ikekwe anaghị etinye aka na nzuzo.
Ndị a bụ ya elu atụmatụ:
Ozi 1000 ezigara kwa ụbọchị
Omenala nzacha na kpọọ
Zipu ozi ezoro ezo na ndị nnata na mpụga
Jiri ngalaba nke aka gị
5 na-aza aha
ProtonMail bụ onye ahịa email na-adọrọ mmasị na ọ megheela isi na gam akporo yana edobere ya dị ka otu iji nwalee, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere mkpa nzuzo ahụ.
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Proton AG
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ProtonMail na-aghọ isi mmalite: onye ahịa email nke na-akwado maka nzuzo
Kachasị mma Androidsis egwuregwu nke ọnwa Eprel: Eluigwe: Childrenmụ nke Ìhè
Etu esi egbochi data na Wi-Fi na ngwa na Xiaomi ma ọ bụ Redmi